Sh/Abuu Muscab: “Hotel Maka Al-Mukarrama Wuxuu Ahaa God Abeeso” (Shir Jaraa’id oo Qodobo Kale Ku Jiraan) – Shabakadda Amiirnuur
Sh/Abuu Muscab: “Hotel Maka Al-Mukarrama Wuxuu Ahaa God Abeeso” (Shir Jaraa’id oo Qodobo Kale Ku Jiraan)
March 2, 2019 5:22 pm by admin Views: 142
Afhayeenka ciidamada Xarkada Al-Shabaab Sheekh Cabdi Casiis (Abuu Muscab) oo goor dhow shir jaraa’id qabtay ayaa faahfaahin ka bixiyay weerarkii Hotel Maka Al-Mukarrama, kii duqeynta ahaa ee Madaxtooyada dib u hanashada degaanka Faxfaxdhuun ee gobolka Gedo.
Weerarkii Hotel Maka Al-Mukarrama.
Ugu horreyn wuxuu ku dheeraaday ka hadalka weerarkii cuslaa ee ay Jimcihii ku qaadeen dhismahii hotel Maka Al-mukarrama ee magaalada Muqdisho, weerarkaasoo uu sheegay in ay khasaare adag ku gaarsiiyeen DF islamarkaana ay kaga dileen 45 askari, tiro intaa ka badanna ay ku dhaawaceen.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in qaar kamid ah raggii fuliyay weerarka ay dib usoo laabteen halka 4 kale ay ku bexeen halkaas, wuxuuna hawada u mariyay duco, isagoo dhankooda raggii soo laabtay u dardaarmay iney dariiqooda ku taagnaadaan.
Sheekh Abuu Muscab ayaa meesha ka saaray hadallada DF ee ku aadan in hotelka uu ahaa goob shacab, wuxuu sheegay in dhismaha la weeraray uu ahaa “God Abeeso” iyo saldhib ciidan oo ay saraakiishu ku shiraan kana soo abaabulaan dhibaatooyinka ka dhanka ah bulshada.
Baaqa uu U Jeediyay Bulshada
Sheekh Abuu Muscab ayaa waxa uu sheegay ineysan raali ka ahayn in dadka muslimiinta ah ay wax yeello gaarto, wuxuu xusay marar badan oo hore ay uga digeen iney ka fogaadaan meelaha bar tilmaameedka ah.
Wuxuu mar kale ku celiyay baaq uu u jeediyay dad weynaha isagoo u sheegay in Mujaahidiintu u taagan yihiin sidii iyaga loo badbaadin lahaa, shisheeyaha looga dul qaadi lahaa, oo diintooda loogu dhaqi lahaa, sidaa darteed wuxuu kula taliyay iney ka fogaadaan xarumaha shisheeyaha iyo kuwa DF.
Sheekh Abuu Muscab ayaa hawl galkii hotel Maka Al-mukarrama kadib ka hadlay duqeyntii ay maanta u geysteen xarunta Madaxtooyada, isagoo sheegay in weerarkan madaafiida ah uu dhacay xilli ay ciidmada DF ah ay wadooyinka ka xireen shacabka magaalada Muqdisho.
Baaq Ku Socda DF.
Afhayeenka ciidamada Xarakada Al-Shabaab ayaa waxa uu talooyin u jeediyay DF iyo ciidameeda. Marka hore wuxuu u sheegay iney Alle u towbad keenaan oo ka haraan qawaaniinta shisheeyuhu qoray iyo ciidanka shisheeye ee dalka kusoo duulay.
Wuxuu ku dhawaaqay in qofkii intaas garawsada ay soo dhaweynayaan islamarkaana uu ka badbaadayo weeraradooda, wuxuuna baaqan ahaa mid uu si xeel dheer ugu jeediyay DF.
Dib U Hanashada Faxfaxdhuun
Sheekh Cabdi Casiis Abuu Muscab ayaa ugu dambeyntii ka warramay isbaddalka uu maanta galay degaanka Faxfaxdhuul ee gobolka Gedo halkaasoo ciidamadii Kenyaanka ee heystay ay isaga bexeen kadibna ay iyagu la wareegeen.
Wuxuu sheegay in Faxfaxdhuul ay ahayd goobtii afaraad ee gobolka Gedo oo ay ciidamada Kenya isaga cararaan, haddana ay ku hareen oo kaliya Buusaar. Ciidamada Kenya ayaa wuxuu sheegay in markii ay imanayeen ay ahaayeen kuwa aad u kibirsan laakin maanta ay carareen iyagoo dulleysan.
Tani wuxuu sheegay iney cibar ku tahay dadkii ka shakisanaa in shisheeyaha laga guuleysan doono islamarkaana uu dalka ka bixi doono. Shirkan jaraa’id ayaa waxa uu kusoo aaday xilli si aad ah loo wada sugayay waxa ay Al-Shabaab ka yiraahdaan dhacdooyinkaasi sadaxda ah.
Halkan Ka Degso Shirka Jaraa’id ee Sheekh Cabdi Casiis Abuu Muscab